သူမရဲ့သားသမီးတွေကိုပြုစုပေးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လစာအပြင်ဘောက်ဆူးတွေပါ ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - Cele Gabar
ပရဟိတမင်းသမီးလေး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ရောက်ရာအရပ်ကလူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ဝမ်းမနာ သားသမီးလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် ဂေဟာလေးကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂေဟာမှာ လည်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဘောက်ဆူးဆိုပြီး မှန်ပုံလေးနဲ့ထားထားပြီး လာလည်တဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်း လှူတန်းသွားကြတာမို့ သူမကဒီငွေလေးကို ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ပြန်လည်ခွဲဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေဟာ တကယ့်ကိုကြည်ကြည်နူးနူးပါပဲ။ သူမရဲ့သားသမီးလေး တွေကို စောင့်ရှောက်ပေးသူတွေမို့ သူမကအခုလိုလုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စိတ်စေတနာ ကောင်းလွန်းတဲ့ မင်းသမီးရဲ့လုပ်ရပ်တိုင်းဟာ မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ပါ။ သူမရဲ့သားသမီးလေးတွေကို စေတနာထားပြီးစောင့်ရှောက်ပေးတာကြောင့် သူမကလည်းပြန်ပြီးမေတ္တာထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောက်ဆူးရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပြုံးပျော်နေပုံလေးတွေကလည်း တကယ့်ကိုကျေနပ်စရာပါ။
ဒီလိုပျော်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို ” တလတခါ လစာထုတ်ပေးတိုင်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အပိုဘောက်ဆူးများပေးတဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဒီလမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကလိုတယောက်ထဲကိုမရစေပဲ. ဗလာမပါကံစမ်းမဲများလုပ်ပြီး မဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ် ဒီလဝန်ထမ်းဘောက်ဆူး မှန်ပုံးစုစုပေါင်း ၁၂၅,၆၀၀ရရှိပါတယ် နည်းသည်များသည်မဟုတ်ပဲ ကျမဂေဟာရောက်တိုင်းလည်း ဝန်ထမ်းဘောက်ဆူး မှန်ပုံးလေးထဲ ကိုထည့်ပေးတယ် ဂေဟာကိုလာတဲ့အလှူရှင်တွေကလည်း ထည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အခုလို ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တာပါ ကျမရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်စေတနာမေတ္တာတရားအပြည့်ဖြင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းများအားလုံး ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ” ဆိုပြီး တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
” သူမရဲ့သားသမီးတှကေိုပွုစုပေးနတေဲ့ ဝနျထမျးတှအေတှကျ လစာအပွငျဘောကျဆူးတှပေါ ပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ ”
ပရဟိတမငျးသမီးလေး ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ရောကျရာအရပျကလူတိုငျးကို ပြျောရှငျအောငျလုပျတတျပါသေးတယျ။ သူမရဲ့ ဝမျးမနာသားသမီးလေးတှကေိုစောငျ့ရှောကျဖို့အတှကျ ဂဟောလေးကိုဖှငျ့လှဈထားပွီး ဝနျထမျးတှခေနျ့အပျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဂဟောမှာလညျး ဝနျထမျးတှအေတှကျဘောကျဆူးဆိုပွီး မှနျပုံလေးနဲ့ထားထားပွီး လာလညျတဲ့ဧညျ့သညျတှကေလညျး လှူတနျး သှားကွတာမို့ သူမကဒီငှလေေးကို ဝနျထမျးတှအေတှကျ ပွနျလညျခှဲဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
ပြျောစရာကောငျးတဲ့အခိုကျအတနျ့လဟော တကယျ့ကိုကွညျကွညျနူးနူးပါပဲ။ သူမရဲ့သားသမီးလေး တှကေို စောငျ့ရှောကျပေးသူ တှမေို့ သူမကအခုလိုလုပျပေးတယျလို့ဆိုပါတယျ။ စိတျစတေနာ ကောငျးလှနျးတဲ့ မငျးသမီးရဲ့လုပျရပျတိုငျးဟာ မတ်ေတာတှေ အပွညျ့နဲ့ပါ။ သူမရဲ့သားသမီးလေးတှကေို စတေနာထားပွီးစောငျ့ရှောကျပေးတာကွောငျ့ သူမကလညျးပွနျပွီးမတ်ေတာထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘောကျဆူးရတဲ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့ ပွုံးပြျောနပေုံလေးတှကေလညျး တကယျ့ကိုကနြေပျစရာပါ။
ဒီလိုပြျောစရာပုံရိပျလေးတှကေို ” တလတခါ လစာထုတျပေးတိုငျး ဝနျထမျးတှအေတှကျ အပိုဘောကျဆူးမြားပေးတဲ့ထုံးစံအတိုငျး ဒီလမှာတော့ပွီးခဲ့တဲ့လကလိုတယောကျထဲကိုမရစပေဲ. ဗလာမပါကံစမျးမဲမြားလုပျပွီး မဲဖောကျပေးခဲ့ပါတယျ ဒီလဝနျထမျး ဘောကျဆူးမှနျပုံးစုစုပေါငျး ၁၂၅,၆၀၀ရရှိပါတယျ နညျးသညျမြားသညျမဟုတျပဲ ကမြဂဟောရောကျတိုငျးလညျး ဝနျထမျး ဘောကျဆူး မှနျပုံးလေးထဲကိုထညျ့ပေးတယျ ဂဟောကိုလာတဲ့အလှူရှငျတှကေလညျး ထညျ့ပေးကွတဲ့အတှကျအခုလို ကမြရဲ့ဝနျထမျးတှကေိုပြျောရှငျအောငျလုပျပေးနိုငျတာပါ ကမြရဲ့သားသမီးတှအေပျေါစတေနာမတ်ေတာတရားအပွညျ့ဖွငျ့ ပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးတဲ့အတှကျ ဝနျထမျးမြားအားလုံးကိုခဈြပါတယျလို့ပွောခငျြပါတယျ ” ဆိုပွီး တငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
“သီတင်းကျွတ်အကြိုအနေနဲ့ မောင်လေးရဲ့ ကန်တော့တာကို ခံလိုက်ရတဲ့ ဖွေးဖွေး”